MACLUUMAADKA ROMAN ROTTWEILER IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Roman Rottweiler iyo Sawirada
Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Adeegga Roman Molosser
Roman Rottweiler guud ahaan wuxuu la mid yahay a heerka Rottweiler, kaliya mastiff-like / adhiga nooca masuulka muuqaal iyo dabeecad. Waxay leedahay mid weyn oo aad u weyn oo sharaf leh, cajiib ah, culus, adag, xoog leh, oo awood leh. Madaxa waa mid ballaadhan, culus oo adag xoogaa duuduub ah. Qalfoofku waa mid ballaadhan oo ballaadhan, oo leh dhabarka ballaadhan ee dhabarka. Joojinta ayaa qoto dheer oo si fiican loo qeexay. Xuubku waa ballaadhan yahay, buuxa yahay oo laba jibbaaran. Dibnaha ayaa si fiican loo soo saaray, dhumuc weyn, oo leh duulimaad dhexdhexaad ah illaa waaweyn, iyo bushimaha hoose ee ciqaabta leh. Ilkaha waa inay sameystaan ​​qaniinyo maqas ah. Indhuhu waa yicib u eg, qoto dheer dejiya, muujiya, si fiican u kala fog oo madow. Dhegaha waa suul, saddexagal, horay loo sii wado oo si fiican loo kala sooco. Maqaarka dhegaha ayaa qaro weyn oo dhogorta ayaa jilicsan. Sanka waa mid balaaran oo madow, ilaa midab aan aheyn midabka salka ee madow mooyee, ka dib midabka sanka waa midabka salka, sida jaakad casaan ah, sanka casaanka ah ama jaakad buluug ah, sanka buluuga ah. Afku waa midab madow. 42 ilkood. Ilkaha waa weyn yihiin waana xoog badan yihiin Qoorta waa xoog badan tahay, si fiican u muruqsan tahay, dhexdhexaad dhexdhexaad ah, oo leh sayax. Laabku waa mid ballaadhan oo qoto dheer, oo leh feeraha si fiican loogu dhawaaqo oo leh feeraha ovalka oo si fiican u soo ifbaxay. Xarunta dhexe waa mid xoogan oo muruq leh. Cagaha hore waa is haysta oo si fiican u qalooca. Dabada ayaa laga yaabaa inay ku xidhan tahay iyadoo ka tagaysa hal ama laba laf-dhabar ama bidix dabiici ah haddii looga tago si dabiici ah waxaa lagu duuduubay dhabarka markii la faraxsan yahay ama la guurayo. Waxaa soo goyn doona soo dewclaws / double dewclaws waa wax caadi ah dhalashada. Koodhku waa qaro weyn yahay wuxuuna u dhexeeyaa min siman ilaa jilitaan wuu dheeraan karaa laakiin lama doonayo. Jaakad qaro weyn oo dheeri ah ayaa loogu talagalay Rottie oo u shaqeeya sidii ilaaliyaha adhiga. Midabka jaakadu waa madow / madow, madow / miridhku, madow / miridh madow, madow / mahogany sidoo kale wuxuu ku imaan karaa casaan / buluug, buluug / buluug ama midabyo kale oo madow ayaa laga aqbalay Roman Rottweiler laakiin ma ahan wax la jecel yahay. Socodka: Rottie waa cagaarshow leh hordhac xoog leh iyo gadaal gadaal awood leh. Waxay si dhib la’aan ah u dabooshaa dhulka.
Rottweilers kii ugu horreeyay wuxuu ku yimid midabbo kala duwan oo kala ah brindle, grey, huruud iyo madow, huruud iyo midab, iyo dabcan waxa illaa iyo maanta aan aragno, aad ayey u yartahay casaanka iyo tan madow iyo tan Rottweilers waxay ahaayeen midabada ugu dhifka ah dhammaantood. Eeyaha huruudda ah iyo tan tan ayaa ugu caansan. Calaamadaha cad ee wajiga, xabadka iyo cagaha ayaa la arkay maanta Rottweiler ayaa inta badan xuubsiin doona qashin ay ku qoran yihiin calaamado cad oo had iyo jeer la libdhiya waqtiga, in kastoo qaarkood ay cadaanku sii hayaan. Rottweiler-kii ugu horreeyay, brindle-ka caadiga ahi wuxuu ahaa midab la aqbali karo.
Waa maxay Roman Rottweiler iyo waa maxay farqiga u dhexeeya iyada iyo heerka caadiga ah ee Rottweiler? Roman Rottweiler waa dib-u-abuurid asal ahaan Rottweiler, mastiff-u eg Rottweiler oo ka soo tallaabay buuraha Alps iyo ilaalinta lo'da iyo sidoo kale dagaalladii lala galay Roomaanka. Waa eey ka weyn kan caadiga ah ee Rottweiler, kaas oo ka gaaban. Roman Rottweiler waa kan Mastiff Tibetan sida caadiga ah Rottweiler waa ku Adhijirka Ustaraaliya . Deganaan, kalsooni leh, tababaran, isboortis, geesinimo leh, ilaalin ah, lagu kalsoonaan karo oo u heellan, waxay leedahay dabeecad la isku halleyn karo. Tababar adag oo taxaddar leh ayaa lagama maarmaan u ah noocyadan, haddii kale waxaad ku dambayn kartaa eey aad u xoog badan oo xoog badan. Hase yeeshe, iyada oo si habboon loo maareeyo, waxay kaloo noqon kartaa wehel daacad ah, kalgacal badan oo abaalmarin badan leh. Eeyahaani waxay u baahan yihiin milkiileyaal xamili kara baaxadooda weyn. Rottie waa eey waardiye dabiici ah oo leh dabeecad jilicsan. Waa mid caqli badan isla markaana cadeeyay qiimaheeda wixii ka baxsan su'aasha booliska, militariga iyo shaqooyinka caadooyinka qarniyo badan. Cabirkeeda darteed, tababarku waa inuu ku bilaabmaa si cadaalad ah dhalinyaro — halka eygu wali yaryahay. Noocani wuxuu ubaahanyahay hogaamin badan, wehel iyo is dhexgalka bulshada inaad si dhab ah u faraxsanaato. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Markuu Rottweiler-ku helo hoggaan joogto ah oo la tababaro, waxay saaxiib fiican u noqon doontaa carruurta. Waxay aqbali doontaa bisadaha, eeyaha kale iyo xayawaannada kale ee guryaha lagu haysto illaa iyo inta eygu si wanaagsan u dhexgalay bulshada oo ay leeyihiin milkiileyaal awooddooda ku sheegta eyga. Asxaabta iyo qaraabada qoyska si caadi ah ayaa loo soo dhoweeyaa si xamaasad leh. Shisheeyaha uu eeygu ka dareemo ujeedooyinka xun kama fogayn karaan laamiga. Noocani wuxuu ku fiicanyahay adeecida tartanka, Schutzhund iyo raadinta.
madow iyo tan coonhound Jarmalka adhijir isku darka
Dhererka: ugu yaraan 26 ½ inji (67 cm) Miisaanka: ugu yaraan 120 rodol (54 kg)
26 1/2 inji - 27 inji (67 - 69 cm) - yar
27 1/2 inji (70 cm) - dhexdhexaad
28 - 29 inji (72 - 74 cm) - weyn
30 inji + (76 cm) - siyaado ah oo aad u weyn
Dhererka: ugu yaraan 24 ½ inji (63 cm) Miisaanka: ugu yaraan 80 rodol (36 kg)
24 1/2 - 25 inji (63 - 65 kg) - yar
25 1/2 - 26 inji (65 - 67 cm) - dhexdhexaad
27 - 28 inji (69 - 71 cm) - weyn
29 inji + (74 cm) - (siyaado aad u weyn)
Noocani wuxuu u nugul yahay dhaawaca ACL. U nuglaanshaha dysplasia sinta Waxay u egtahay khuuro iyo cunno badan. Sidoo kale u nugul soo gelitaanka (yaraynta jeexitaanka indhaha u dhexeeya).
Roman Rottweiler wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Eeyahaani waa kuwo aan firfircooneyn gudaha gudaha iyo daarad yar ayaa ku filnaan doonta.
Roman Rottweiler wuxuu ubaahan yahay jimicsi badan. Ma siin kartid eydan adag shaqo badan ama jimicsi ay ku barwaaqoobaan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta socod ama orod . Ku orodka kaynta iyo dhulka banaan iyaga ka dhigaysa mid aad u faraxsan iyaga oo aan doonaynin inay kaa fogaadaan. Dabaasha ama ku ordaya baaskiilku waa waxqabadyo ku habboon eeyahaas waxayna sidoo kale jecel yihiin soo qaadashada kubad.
Qiyaastii 10 ilaa 12 eey
sawirada shar pei pitbull mix
Jaakad jilicsan oo dhalaalaysa way fududahay in la xajiyo. Ku caday burush adag oo maydh oo ku maydh markii loo baahdo oo keliya. Koodhadhka loo yaqaan 'Plush' sidoo kale way fududahay in la daryeelo oo la isticmaalo burush jilicsan jaakadaha dhaadheer waxay u baahan yihiin xoogaa feejignaan ah waxayna kuxirantahay dhererka jaakad iyo dhumucdiisaba. Noocani waa celcelis daadiya.
Roman Rottweiler macno ahaan waa Rottweiler aad u weyn, kaas oo ka run badan eeyaha asalka ah ee jiray boqollaal sano ka hor. Waxaa jira gacan yarayaal gacan-yarayaal ah oo soo saara noocaan oo kale ah Rottweiler. Mid ka mid ah soosaarayaasha, oo loo yaqaan Emily Tiscarenio oo ka socda Colossal Rottweilers, ayaa ku guuleystay helitaanka nooca lagu aqoonsaday Diiwaanada Waxbarshada ee Akadeemiyadda oo ku hoos qoran magaca Roman Rottweiler. Dib-u-abuuriddan Rottweiler-ka asalka ahi waa mid ka soo jeeda Mastiff Tibetan iyo malaha mastiff Talyaani ah Awoowayaashan hore ee Roomaanku waxay ku abtirsanayeen eeyaha adhijirka ah iyo eeyaha dagaallama. Markii ugu horreysay ee ay ka soo muuqdaan iyagoo qoraal ah waxay ahayd 74 A.D. Roomaanku waxay adeegsadeen eeygan buuraha ah xilliyadii qarniyadii dhexe inay daaqaan oo ay u ilaashadaan lo'da askarta Roomaanka ee ka gudbaya buuraha Alps. Waxay ahayd inay weynaato oo la ilaaliyo oo la dhaqaajiyo lo'da quudinaysa guutooyinka Roomaanka iyo xoog iyo qallafsanaan ku filan jidh ahaan iyo maskax ahaanba dhulka buuraha adag. Waxay ahayd inay noqoto mid caqli badan, diyaarna u ah inay shaqeyso, oo leh dareen ilaalin adag. Eeyahaas waxaa la keenay Yurub iyaga oo wata guutooyinkii soo duulay ee Romanka. Eheladooda ugu dhow ayaa ah Eeyaha Weyn ee Switzerland iyo Buurta Bernese , waana suurtagal in Feedhyahan waa la xiriira. Markay Roomaaniyiintu ka tageen lo'doodii eeyaha galbiyey (Rottweilers) oo degay Jarmalka dariiqyo aan la mari karin iyo dhul-mareenka awgood, kani waa markii Jarmalku haystay tijaabooyin dhowr ah oo ah nooca. Meelahaasi waxay noqdeen dhul Roomaan ah. Hal deegaan wuxuu ahaa Rottweil, oo la dhisay 74 AD Markii Rottweil ay ku qasbanaadeen inay lo'da daaqaan, lo'da ilaashadaan, oo ay lo'da ilaashadaan, oo ay dibiyada daaqaan, oo ay helaan dibiyada sharka leh ee dhaqaaqa, oo ay ilaaliyaan sayidkiisa iyo hantidiisa boorsadiisa lacag ee uu ku xidhay qoorta Rottweiler, kuwani wax fudud may ahayn. Ka dib markii Jarmalku helay Rottweiler waxay bilaabeen inay soo saaraan cabir ahaan sidaas oo kale ayuu ahaa dhamaadka Roman Rottweiler. Xitaa waagaas kadib waxaa jiray khilaaf weyn oo udhaxeeyay Rottweiler-ka yar iyo Rottweiler-ka weyn si loo helo dagaal gacan ka hadal ah. Jarmalku waxay doonayeen Rottweiler ka gaaban si uu u wanaajiyo awoodiisa dhaqashada. Markuu dibi dhaqaajinayo eygu wuxuu qaniinay lugaha ilaa dibigu dhaqaaqayo Waxay doonayeen inuu ka gaabiyo sidaa darteed qaniinyada ma burburin tayada hilibka oo ka sarreeya lugaha. Eeyaha gaagaaban ayaa lugaha ka yara yaraaday. Markii dibiga la badalayo, dibiga waqti adag ayaa ka haystay weerarka iyo dhaawaca eyga yar sidaa darteed waxay si badheedh ah ugu doorteen eeyaha abaal-marinta ku jira barnaamijkooda taranka. Waxaa jiray kuwa kale oo doonayay inay ilaashadaan asalka Rottweiler iyo eeygan weyn ee awoodiisa, ilaalinta awoodaha, gaadiidka iyo awooda ugaarsiga ciyaarta weyn.
Mastiff, Ilaaliyaha Flock
AKR = Diiwaanka Kennelka Tacliinta
IRUMR = Diiwaanka Diiwaanka Molosser ee Caalamiga ah ee Roomaanka
Nin weyn oo reer Roman Rottie ah oo leh eey - Sawir waxaa iska leh Colossal Rottweilers
'Kormeere' Riesig's Black Roman Shield fasalka waxqabadka Roman Rottweiler ee 2 sano jir. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Purple Dog von Riesig fasalka waxqabadka Roman Rottweiler ee 1 sano jir. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
dachshund lagu qasay spaniel cocker
Radio Flyer von Riesig oo ah fasalka waxqabadka Roman Rottweiler oo jira 2 sano. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Elway fasalka waxqabadka Roman Rottweiler da'da 4 sano. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Jack pomeranian muqisho isku darka Russell
Bausto fasalka waxqabadka Roman Rottweiler ee 4 sano jir. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Gunnar fasalka qabyada ah Roman Rottweiler ee 8 sano jir. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Mrs. Furs fasalka qabyada ah Roman Rottweiler at 4 sano. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Akira von Riesig fasalka qabyada ah Roman Rottweiler at 2 sano jir. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Marilyn von Riesigthe fasalka waxqabadka Roman Rottweiler ee 8 bilood jira. Lahaanshaha sawirka Colossal Rottweilers
Eeg tusaalooyin badan oo ah Roman Rottweiler
Sawirada Roman Rottweiler
qoob-ka-ciyaarka 'hound' iyo 'labrador retriever'
tababaro isku dhafan american bulldog pitbull
10ka eeyood ee ugu sareysa ee wax qaniinaya
Terrorka shaqaalaha iyo isku darka feerka